Dare reMakurukota Rozeya Bhiri reKuvandudza Kurapwa kweVeruzhinji Munyika
Bhiri iri rinonzi richarerutsira veruzhinji kuti vawane hutano hwakanaka
Dare remakurukota rave kuzeya bhiri rekuvandudza kurapwa kweveruzhinji munyika, rePublic Health Management Act Ammendement Bill, kuti rizoende kuparamende uko nhengo dzeparamende dzati dzichapasisa bhiri iri nekukasika kuti veruzhinji vawane hutano hunokodzera.
Izvi zvaziviswa nemunyori mukuru mubazi rezvehutano nekuchengetedzwa kwevana, Dr Gerald Gwinji, avo vati bazi ravo rakatora makore akawanda kugadzirisa mutemo uyu nekuti raida kuona kuti zvese zvinonetsa vanhu zvagadziriswa.
Vati mutemo uyu wakagadzirwa mugore ra1924 uye pave nezvirwere zvakawanda zvavepo kubvira panguva iyi, uye mutemo uyo wave kugadziriswa kuti ufambirane nenguva.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvehutano, Dr. Ruth Labode, vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti hurumende yave kugadzirisa mutemo uyu kuti ufambirane nezviri kuitika mazuvano.
Mutemo wePublic Health Act sezvauri, haubvumidze vanachiremba nanamukoti kuti varape vechidiki vanenge vaine zvirwere zvepabonde kunyange hazvo paine humbowo hwekuti vechidiki vakawanda munyika vave kuita zvepabonde vasati vasvika pazera rino bvumidzwa kuita izvi.
Dr. Labode vati kuvandudzwa kwemutemo uyu kuchagadzirisa izvi pamwe nedzimwe nyaya dzakaita sekuti vana amai vakazvitakura vano fanirwa kubatsirwa pachena muzvipatara zvehurumende.
Imwe nyaya inotarisirwa kugadziriswa nemutemo uyu inyaya yekupa mari kunyaya dzehutano munyika.
Pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika panyaya dzehutano sezvo hurumende iri kutadza kuisa mari inokwana kunyaya dzehutano, izvo zvave kukonzera kuti vakawanda munyika vashaye mishonga nezvimwe zvikwanisiro muzvipatara zveveruzhinji.
Vamwewo vanowana munyika kusanganisira mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe, mhuri yavo, makurukota pamwe nevamwe vakuru-vakuru muhurumende, havachina chivimbo nezvipatara zvemunyika zvekuti vave kuno rapwa kunyika dzakaita seSingapore, India neSouth Africa.
Dangwe raVaMugabe, Amai Bona Chikore, vakanobatsirwa mwana wavo kuSingapore, uye kutaura kudai VaMugabe pachavo vari kunyika iyi uko vari kufungidzirwa kuti vari kurapwa maziso nezvimwe zviri kuvanetsa.
Zvikamu makumi masere kubva muzana zvemari yese iri kushandiswa muzvipatara muZimbabwe zviri kubva kumasangano anopa rubatsiro pamwe nenyika dzakaita seAmerica.